Nagu saabsan - Qingdao Topwell Qalabka Kiimikada Co., Ltd.
Qingdao Topwell Qalabka Kiimikada Co., Ltd. oo la aasaasay 2014, waa alaab-qeybiye xirfadle ah oo ku hawlan cilmi-baarista, iibinta iyo midab gaar ah oo la qaabeeyey iyo dheeh kaas oo xiriir la leh noocyada laydhka - Iftiinka UV, nalka u dhow infrared (IR), iftiinka muuqda.
Wax soo saarkayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah,
1. UV / IR midab dhalaalaya iyo dheeh,
2. Dheeh nuugista infrared ku dhow
3. Dheeh iyo sawir midab leh,
4. Dheeh muuqda
5. Midabka Thermochromic.
Waxaan sidoo kale bixinaa oo aan u habeynay dheehan iyo midabkan, midabyada sawir qaadaha ah ee muraayadaha indhaha iyo daaqada ama filimka baabuurka, midabbada dhaadheer ee dhaadheer ee loogu talagalay filimka guriga cagaaran iyo baabuurta qaybo gaar ah, midab dhaadheer oo dhaadheer oo UV ah iyo midabka IR oo loogu talagalay warshadaha daabacaadda amniga, oo u dhow dheeha nuugista infrared. , nuug buluug nudaha, dheehyada miiraha, kiimikada dhexdhexaadka ah, dheehyada shaqeynaya, midabada xasaasiga ah.
Kuwa ugu muhiimsan, waxaan qaadnaa noocyo kala duwan oo kiimikooyin ganaax ah iyo midabbo gaar ah oo loo habeeyay ka shaqeynta iyo adeegyo isku-dhafan, iyadoo si adag loogu kalsoon yahay macaamiisha.
Wax soo saarkayagu si fiican ayuu u iibiyaa USA, Jarmalka, Faransiiska, Brazil, Japan, iyo waddamo kale ama gobollo. Waxaan caan ku nahay tayada ka sareysa, qiimaha tartanka, farsamooyinka heerka koowaad, xirmo nabdoon, iyo keenis deg deg ah.
Waxaan si daacad ah u soo dhaweyneynaa saaxiibo ka socda adduunka oo dhan inay soo booqdaan shirkadeena oo ay nagala shaqeeyaan iskaashi ku saleysan faa'iidooyinka muddada-dheer.